प्रभुनारायण बस्नेत | Ratopati
बुधबार १९ मङ्सिर, २०७५ Monday, 13 July, 2020
पुष्पलाल नै समस्याका जड हुन् access_timeबैशाख ३०, २०७६
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको सत्तरी वर्ष भएको छ । पुष्पलाल समेतका चार (पाँच ?) जनाले स्थापना गरेको यो पार्टी प्रचण्ड बहुमतका साथ अहिले सत्तामा छ । फुट र विभाजनको मार्गबाट गुज्रँदै यहाँसम्म आइपुगेको यो पार्टी आज पनि आधादर्जन बढी समूहमा विभाजित छ । विभाजनको यो रो...
सबै राजनीतिक दलहरू लुटेरा नै हुन् त ? access_timeबैशाख २, २०७६
पछिल्लो आम निर्वाचन जितेर सरकार निर्माण गरेपछि ओली–प्रचण्ड नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)माथि अनेक सङ्गीन प्रश्न उठेका छन् । प्रश्न राजनीतिक वृत्तबाट पनि उठेका छन्, गैरराजनीतिक वृत्तबाट पनि, सत्तारुढ दलबाटै पनि उठेका छन्, विपक्षी दलबाट पनि । सम्पूर्ण मुलुक य...
मृत्युपछि पनि अन्यायले नछोडेका एक हस्ती access_timeचैत १३, २०७५
भनिन्छ, मान्छेको सही मूल्याङ्कन उसको मृत्युपछि मात्र सम्भव हुन्छ । झट्ट सुन्दा यो कथन सत्य जस्तो लागे पनि यसलाई मूल्याङ्कन सही तरिका मान्न सकिँदैन । कुनै पनि मानिसको मूल्याङ्कनको आधार उसको निष्ठा, इमानदारी, प्रतिबद्धता, सक्रियता, कार्यकुशलता हुनुपर्छ । मूल्याङ्कन गर्ने भनेको उस...
कम्युनिस्ट नेता जसको शव नेपाल ल्याउन दिइएन access_timeपुस २५, २०७५
जयगोविन्द साह नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अग्रज नेताको नाम हो । वि.सं. १९७६ सालमा सिरहा जेलमा जन्मिएका साहको बाल्यकाल अत्यन्त कठिनाइपूर्वक बित्यो । पिता मिश्री साह र माता जगतकुमारी प्रेमका कारण जेल परेका थिए । जेल पर्दा गर्भवती रहेकी उनकी माताले उनलाई त्यही ज...
काँग्रेस पतनबाट बच्ने हो भने... access_timeपुस १३, २०७५
मुलुकको जेठो प्रजातान्त्रिक दल नेपाली काँग्रेसको महासमिति बैठक सम्पन्न भएको छ । महासमितिले पार्टीको विधान संशोधन प्रस्ताव, सङ्गठनात्मक प्रतिवेदन र राजनीतिक प्रस्ताव पारित गरेको छ । उसलाई मुलुक सङ्घीयतामा गएपछिको साङ्गठनिक संरचना तदनुकूल बनाउन विधा...
किन बन्दैछ सरकार एनजीओको खेलौना ? access_timeमंसिर १६, २०७५
युनिभर्सल पिस फेडेरेसन (यूपीएफ) नामको विवादास्पद संस्थाले काठमाडौँमा आयोजना गरेको एसिया प्यासिफिक समिटमा सरकारको सहभागिताले नेपालको संविधानको उल्लङ्घन गरेको छ । दक्षिण कोरियाका क्रिस्चियन सन म्यङ मुनले शान्तिको नाममा धर्मप्रचार हेतु स्थापना गरेको यूपीएफले संसारभरि ध...
प्रधानमन्त्री ओलीमाथि 'कार्यकारी' हुने भूत access_timeमंसिर ६, २०७५
खड्ग ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन भएको नौ महिना वितिसकेको छ । इतिहासकै शक्तिशाली ठानिएको यो दुई तिहाई बहुमतको नेकपा–फोरम गठबन्धनको सरकार अहिले व्यवहारमा कमजोर, निरीह र असाहय सावित भएको छ । उत्साहपूर्ण रूपले कार्य प्रारम्भ गरेर गठनको केही महिनासम्म सबै क्षे...
घुँडा टेकाएर नै समाजवाद आउने हो ? access_timeकात्तिक २६, २०७५
यस पटकको दशैं हाम्रा राष्ट्रपति टीका प्रकरणले निकै चर्चित बन्न पुग्यो । घुँडा टेकाएर टीका लगाइदिएको घटना व्यापक रूपले प्रचार भएपछि भाइटीका कार्यक्रममा पत्रकार प्रवेशनिषेध गरियो । दशैंको बेला मान्यजनबाट टीका ग्रहण गर्नु नेपालीको पुरानो परम्परा हो । यसलाई पारिवा...
मदन भण्डारीभन्दा स्पष्ट थिए चक्र बाँस्तोला ! access_timeकात्तिक १४, २०७५
काँग्रेस नेता चक्रप्रसाद बाँस्तोलाको निधन भएको अब महिना बित्न लाग्यो । करिब पाँच वर्ष कोमामा रहेका बाँस्तोलाको असोज २७ गते भएको निधन भयो । यसले जति ठूलो हलचल हुनुपथ्र्यो त्यति भएन । बनारसमा अध्ययन गर्दै काँग्रेस बनेका बाँस्तोलाको पञ्चायत कालमै पनि निकै चर्चा हुन...
बुट पोलिसले राजनीति शुद्धीकरण हुन्छ ? access_timeमाघ २१, २०७४
एकसाथ सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा नराम्ररी पराजित भएपछि मुलुककै जेठो राजनीतिक दल नेपाली काँग्रेसभित्र अनेकखाले रोमाञ्चक दृश्य देखिन थालेका छन् । चुनाव हारेपछिको रनाहामा मलम लगाउन एकथरी युवाहरू बुढो पुस्ताविरुद्ध आक्रमक बन्दै अब नेतृत्व हस्तान्तरण गरेर आफ्...
मोहनचन्द्र, अम्बर कार्कीहरूले न्याय पाउलान् ? access_timeपुस ३०, २०७४
प्रभुनारायण बस्नेत सन् १९१७ को अक्टुबर २५ तारेखमा अखिल रसियाली सामाजिक जनवादी पार्टी (बोल्सेभिक)ले क्रान्ति सम्पन्न गरेपछि रुसमा अन्योल र अराजकता व्याप्त थियो । स्मोल्नी भवन कब्जा गर्न प्रयोग भएका पेत्रोग्रादका मजदुरको घोड्चडी फौजले जोमाथि पनि आक्रमण गर्ने स्थिति थियो । त्य...
मार्क्सवादी स्कूल सञ्चालनः विनाशकाले विपरित बुद्वि access_timeअसोज १८, २०७४
‘एमाले कार्यकर्तालाई मार्क्सवाद सिकाउनु हुँदैन, मार्क्सवादी सिकायो भने तिनले निर्वाचनका सबै अस्त्र प्रयोग गरेर पार्टीलाई जिताउँदैनन् ।’ यी झण्डै साढे दुई दशकअघि नेकपा (एमाले)मेची अञ्चल इन्चार्ज देवराज घिमिरेले व्यक्त गरेका उद्गार हुन् । एमाले, माओवाद...
तराईमा माओवादी जितको रहस्य access_timeअसोज ६, २०७४
भयाङ्कर रक्तपात हुने आशङ्का विपरीत अत्यन्त उत्साहपूर्ण र अपेक्षा विपरीत शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भयो, प्रदेश नम्बर दुईको निर्वाचन । तीन चरणमा सम्पन्न स्थानीय तहको यो अन्तिम चुनाव हो । दश वर्षअघिसम्म हिंसा, हत्या, आतङ्क र त्रासको केन्द्र रहेको तराईलाई आज पनि अनेक खाले स्वार्थको ख...
चुनावी तालमेल : चरम पदलोलुपतासँगै सिद्धान्त सती गयो access_timeभदौ ३०, २०७४
प्रभुनारायण बस्नेत संवत् २०७२ को संविधानले व्यवस्था गरेअनुरूप स्थानीय तहको दुई चरण निर्वाचन सम्पन्न भएको झण्डै आधा वर्ष वित्न लागेको छ । यही असोज २ गते तराई प्रदेश भनिने दुई नम्बर प्रदेशको पनि चुनाव हुँदै छ । त्यसको लगभग साढे दुई महिनापछि नै प्रदेश र केन्द्रीय स...
मधेशी नेताहरू ! जयचन्द होइन पुरु बन्न खोज access_timeभदौ २२, २०७४
अन्ततः मधेशवादी भनिएका तराई प्रदेशमा क्रियाशील साना क्षेत्रीय दलहरूको मोर्चा (?) राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) निर्वाचनमा सहभागी हुने भएको छ । सर्वप्रथम तराईका मुद्दालाई उठाउने उपेन्द्र यादवको समाजवादी फोरम र विजय गच्छदारको फोरम लोकतान्त्रिकले भने यस अघि भएका दुवै...
नेताहरु दास मानसिकताबाट कहिले मुक्त हुने ? access_timeभदौ १४, २०७४
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा छिमेकी देश भारतको पाँच दिने औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरी स्वदेश फर्किसकेका छन् । देउवाको भ्रमणसँगै नेपाल भारतबीच केही जटिल प्रश्न पनि खडा भएका छन् । भ्रमणका क्रममा नेपाली प्रधानमन्त्री के बोले, दुई देशका प्रधानमन्त्री बीचको गोप्य वार्तामा ...
बाढी र पहिरोसँगै सार्वभौमिकता पनि डुब्ने खतरा access_timeभदौ १, २०७४
साउन महिनाको अन्तिम साताको अविरल वर्षाले सिङ्गो राष्ट्र भयाङ्कर बाढी, पहिरो र ढुवानमा पर्यो । वर्षाको प्रभाव देशका सम्पूर्ण क्षेत्रमा परे पनि त्यसको मार भने सबै क्षेत्रमा एकनास रहेन । पहाडी जिल्लाको तुलनामा यो वर्षाको असर तराईमा अत्याधिक पर्यो । अहिलेसम्म लगभग डेढ सयले ज्या...
वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक शक्तिको निर्माण र राप्रपाको विभाजन access_timeसाउन २६, २०७४
वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक शक्ति बन्ने सपना सजाएर एक भएका पूर्वपञ्चहरूका दुई पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल (राप्रपा नेपाल) वर्षदिन नबित्दै पुनः विभाजित भएको छ । मुलुकको राजनीतिको प्रजातान्त्रिक खेमामा नेपाली काङ्ग्रेस मात्रैको एकलौटी...